नेकपा र सूर्य चिह्न कसको होला ? – Interview Nepal
काठमाडौं , पुस ९ । पार्टीका दुई खेमा अलग्गिएसँगै जनमानसमा एउटा जिज्ञासा व्याप्त छ– नेकपा र सूर्य चिह्न कसको होला रु विज्ञहरू यसका तीनवटै सम्भावनाबारे मत राख्छन्–
३.कसै न कसैको (निलम्बन हुने)
२.दाहाल–नेपालतिर साविक केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ।
३. मनोनीतबाटै चलिरहेको दलमा ओलीतर्फ थप सदस्य मनोनयन गरिएका ९४४६ बाट ११९९ पु¥याइएका) छन्, जसको बहुमत उक्त खेमामा पुग्छ।
दुवै खेमा निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। यसको निक्र्योल अब आयोगले गर्नेछ। त्यसमा कुन तहका नेता र कुन केन्द्रीय समितिलाई आधार मान्ने भन्ने उसैले विश्लेषण गर्नेछ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा प्रकाशित छ ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको राय पनि उस्तै छ। ‘सदस्य को–को हुन्, त्यो टुंगो लगाउनुपर्छ। त्यसपछि कुन समूहमा बहुमत हुन्छ, त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ’, उनले भने। उनका अनुसार कसलाई आधिकारिकता दिने भन्दा पहिला उनीहरूले पेस गरेका प्रमाण, विगतका नजिर, विगतका सर्वसम्मत निर्णयजस्ता आधार हेरिनुपर्छ। ‘कहिले विवाद उठ्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। दुवै पक्षलाई आफ्ना तथ्य प्रमाण पेस गर्न सूचित गर्नुपर्छ। दुवै राखेर सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ। सहमति नभए ठोस आधार प्रमाण माग्नुपर्छ। ठोस प्रमाण आधार पुगेकालाई आधिकारिता दिनुपर्छ’, उनले भने।